Ubungqina Bakho NgoBonono -
IiVidiyo kunye namaNqaku
Unomdla malunga nophando olutsha malunga nemiphumo ye-intanethi?
Ukuzibuza malunga nokusetyenziswa kwezesondo? Ukunyuka kwezinto eziphambili? Umnqweno ophantsi wokulala ngesondo? Ukuxhalaba kwezenhlalakahle, iingxaki zengqondo, ukungabi nokhuthazo?
Ukho kwindawo elungileyo.
Iinkcukacha ezithe xaxe Translations
Khangela uluhlu lwethu oluncedo oluphandwayo kunye neenkcazelo zesayensi zesiseko.
Iqoqo lezifundo ezisekela ibango ezenziwe kule website zingatholakala apha. Kwakhona, izicalulo zezifundo kunye namaqaku alahlekisayo.
Ukuziphendukela kwemvelo akulungiselelanga ubuchopho bakho namhlanje. Funda i-synopsis yeengcamango ezibalulekileyo zesayensi kwingxelo elula yokuyiqonda.
Intetho yeTEDx nguGary Wilson
NJE VIDEOS NEEMFUNDO
Dlulisa amehlo Ubomi Bakho Kwiendaba ezixhamliweyo ezixhamlayo, ezibandakanya amabali avuselelekileyo.
Ngaba unayo i-Porn-Ductive Dysfunction? Thatha le Quiz
Ubomi bam bokwabelana ngesondo buphucuke kakhulu
Uvakalelo kwilungu lam lobudoda luyaphucuka
Ubomi bumnandi ngakumbi emva kokuhamba inyanga ngaphandle kwe-porn
FUNDA: Ngaba ukusetyenziswa gwenxa kwe-intanethi kwi-intanethi kunxulunyaniswe nokungasebenzi gwenxa ngokwesondo kumadoda aselula? Uhlalutyo lwe-multivariate olusekwe kuvavanyo olusekwe kwihlabathi jikelele (2021)
Ubudala be-18 - ibhinqa-Iinzuzo zokuyeka i-porn
Ubudala be-25 - Ukusuka kwi-Erectile Dysfunction ukuya kuhlala nzima emva kwesondo
Uloyiso lomthetho ngaphezulu komhlukumezi / ungcolisa igama likaNicole Prause: Ngumenzi wobubi, hayi ixhoba!
Ubudala be-16 - Ingxaki enkulu yokuba nzima
Ubudala-37: Ukuphuculwa kwe-libido
Umbhali othengisa kakhulu Ubungqina bakho kwi-Porn, uGary Wilson, usweleke.
Ubudala be-41 - Ukwabelana ngesondo kumnandi kwaye andisalibazisi ukukhupha
Ukuqalisa kwakhona iForam yesizwe
"Ukuqalisa kwakhona" kukuphumla ngokupheleleyo ekuvuseleleni ngokwesondo, kubandakanya iphonografi ye-Intanethi. Qalisa kwakhona ingqondo yakho ngokukhuthaza kunye nemfundo kuyo RebootNation.org
Yonke into oyifunayo ukuze uphile ngaphandle kwe-porn kwaye wonwabe ngesondo kwakhona
Iikhosi zevidiyo ezikwi-Intanethi ezikukhokelela inyathelo nenyathelo lokuyeka ukusetyenziswa gwenxa kwe-porn kunye nokubuyisela umva izinto ezingamanyala ezenziwa ngokwesondo, ngu-Noah BE Church. Funda nzulu
Ixesha lokufumana inyaniso nge-intanethi ye-intanethi
Ubuchopho bakho kwi-Porn bufumaneka i-audio, ebook, kunye nephepha ku $5.99. Iinguqulelo ezininzi zifumaneka.
Thenga ngoku Translations
"Yintoni ingxaki xa abantu abancinci befunda ngesondo nge-porn kwaye bacinga ukuba ubundlobongela yinxalenye eqhelekileyo ... t.co/eOxtb92QFS
Joyina iRboot Nation
"Ukuqala kwakhona" kukuphumla okupheleleyo kwintsebenzo yesini, ngokuquka i-intanethi ye-intanethi. Qalisa kwakhona ubuchopho bakho ngokukhuthaza kunye nemfundo
Malunga nale Site
Ubunjani Bakho kwiNcwadi yeThumbulu
Iphepha eliphambili kunye nee-FAQ
Icandelo le ED
Ukukhawuleza kuphakama kwiingxaki zesondo zobutsha
Ziziphi iingcali ezixelela i-PIED Abafayo
Ukubuyiselwa kwakhona kweSiseko seNqaku
Izixhobo zoTshintsho kunye nokuBuyisa kwakhona
Iinketho zeNkxaso noNcedo
Iingcebiso Ezivela Kwimpumelelo Ababuyiselwayo
Ukuqalisa kwakhona kunye nokuSebenzisa i-Porn kwi-FAQs
Ukubuyiselwa (ukubuyisela kwakhona) Iingxelo ezizimeleyo
IiForam, iiBlogs, iingqungquthela
Ukufundisa Umgulana Wakho
Uphando oluPhezulu Page
Izifundo ze-Neurological on users Porn
Izifundo ezithandabuzekayo nezilahlekisayo
I-ICD-11: Ukuxhatshazwa kwezesondo zoMzimba
Umbutho waseMerika wezoLungiso lweMilutha
Iiblogi kunye neeVlogs